भोलि फूलपातीको दिन: तपाईको दिन शुभ-अशुभ कस्तो रहला? हेर्नुहोस् राशिफल! – List Khabar
Home / राशिफल / भोलि फूलपातीको दिन: तपाईको दिन शुभ-अशुभ कस्तो रहला? हेर्नुहोस् राशिफल!
admin October 11, 2021 राशिफल Leaveacomment 216 Views
मेषः शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनतको काम गर्न सकिने हुनाले मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । माया प्रेमको डो रो क सि ने तथा परिवारका साथ घरमै बसेर मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । पढ्ने लेख्ने काममा थोरै समय दिएपनि भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ ।
मिथुनः बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिस्पर्धी हरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । आफन्त तथा सहपाठीहरुबाट सुनिने शुभ समाचारले उत्साह जगाउनेछ । माया प्रेम क सि लो भएर जानेछ । मध्यान्हबाट समय मध्यमय रहेकोले भौतिक सम्पत्ती तथा विलाशी वस्तुका प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
Previous बैंकबाट ऋण लिएका र लिन चाहनेहरुलाई दुखको खवर !
Next जमानत याचिका खारेज भएपछि गौरीको आँखाबाट आँसु बगिरहेको भिडियो भाइरल